Isbadalo lagu sameeyay masuuliyiinta gobolka shabeelada dhexe. – The Voice of Northeastern Kenya
Isbadalo lagu sameeyay masuuliyiinta gobolka shabeelada dhexe.
Warqad ka soo baxday xafiiska Wasiirka Arrimaha Gudaha maamulka Hir-Shabeelle Maxamed Cali Caadle ayaa isbedel ku sameeyay mas’uuliyiin ka tirsan Maamulka Gobolka Shabeellaha Dhexe.
Wareegto kasoo baxday Xafiiska Wasiirka Arrimaha Gudaha Hir-Shabeelle ayaa waxaa isbedel lagu sameeyay Guddoomiye ku xigeenada Gobolka shabeelada dhexe,waxaana sidoo kale uu Magacaabay Xoghayaha Maamulka Gobolka Shabeellaha Dhexe.
Wareegtada ka soo baxday xafiiska wasiirka arimaha gudaha Hirshabeele ayaa lagu sheegay in wasiirku isbadal ku sameeyay maamulka gobolka shabeelada Hoose kadib markuu la tashaday madaxda sare ee Maamulka Hirshabeele.
C/laahi Axmed Maxamuud Shitaawe oo horay u ahaa gudoomiye ku xigeenka maamulka iyo Maaliyada gobolka shabeelada dhexe ayaa loo magacaabay gudoomiye ku xigeenka Maaliyada, Cali Ibraahim Beesh oo horay u ahaa xoghayaha guud ee maamulka gobolka shabeelada dhexe ayaa loo magacaabay gudooomiye ku xigeenka gobolka shabeelada dhexe sidoo kale Abshir Ibraahim Maxamed ayaa isna loo magacaabay xoghayaha guud ee maamulka gobolka shabeelada dhexe.
Dhanka kale Xildhibaano ka tirsan Baarlamaanka maamulka Hir-Shabeelle ayaa bilaabay dadaal lagu xalinayo dagaal beeleedyo ka dhacay deegaano ka tirsan Gobolka Shabeellaha Dhexe.
Deegaano hoostaga degmada Warshekh ee Gobolka Shabeellaha Dhexe ayay dagaal beeleedyadaas ka dhaceen,waxaana dhawaan socdaal ku tegay Xildhibaano ka tirsan Baarlamaanka Hirshabeelle,si ay usoo afjaraan dagaal beeleedyadaas.
Mid ka mid ah Xildhibaanadaas oo la hadlay Warbaahinta gudaha Soomaaliya ayaa sheegay inay bilaabeen qorsho la xiriira dib u heshiisiin sidoo kalena ay gudi u saareen dhibaatooyinkii ka dhashay dagaal beeleedyadaas.
← Dugsiyada dalka oo maanta dib loo furay
Kulanka golaha wasiirada maamulka Jubaland oo looga hadlay arimo dhowr ah. →